Google AdWords maka genlọ ọrụ | Ngwaọrụ niile Need Chọrọ!
Google AdWords maka genlọ ọrụ: Mgbasa ozi ndị ahịa gị niile na-achịkwa
Iji ngwa Google Ads maka ụlọ ọrụ ndị a, ị ga - echekwa oge ka ị nwee ike lekwasị anya n'ihe kachasị mkpa: ndị ahịa gị.
Kasị mma atụmatụ maka otu-okowụk apps
Nweta Ịma Ọkwa na akụkọ na ozugbo na gị ahịa 'mkpọsa arụmọrụ.
Nweta ozi maka ihe kacha dị mkpa na ngwa Google AdWords for Agencies
Melite ma hazie notifications iji mara mgbe mgbanwe ga-agbadata ma ọ bụ mgbe ịchọrọ ịkwalite mkpọsa.
Tinye na Slack Tinye Ìgwè Tinye na Google Chat
Automatic Smart Akụkọ kwa ọnwa
Inyocha miri emi monthly reports na-egosipụta usoro ihe eji achọ mma na uto nke mkpọsa ndị ahịa gị.
All data na otu Pịa na Google Sheets
Egbula oge nke abụọ n'iji aka gị kpokọta metrik ndị ahịa gị. add them to a Google Sheet. ngwa ngwa na ngwa Google.
Download Google mpempe akwụkwọ tinye-na
Mma gị ahịa 'mkpọsa arụmọrụ
Chịkọta data Google Sheets , hazie ihe ngosi ngosi dịka ọ dị mkpa, ma nweta Smart Report kwa ọnwa nke enwere ike izigara ndị ahịa gị.
Download Google mpempe akwụkwọ tinye-na Tinye na Slack Tinye Ìgwè Tinye na Google Chat
More banyere Google AdWords maka Ngwaọrụ genlọ Ọrụ
Mụtakwuo maka ngwa anyị emere maka Google AdWords maka ụlọ ọrụ yana ihe niile anyị nwere ike ịnye gị na azụmaahịa gị.
Ihe anyị na-enye n'ihi na gị na mgbasa ozi gị n'ụlọnga
Ezubere ngwaọrụ anyị iji melite atụmatụ Google AdWords maka ụlọ ọrụ ma ndị otu Clever Ads haziri ya iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe ma nye gị njikwa zuru oke, oge niile na ebe ọ bụla ịchọrọ, nke mkpọsa gị na nke ndị ahịa gị .
Chọrọ ka gị niile mkpọsa kachasị, ruo ụbọchị, na na gị Google chat ? Ihe a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe anyị nwere ike ịnye gị, ha niile ezubere ịgwa gị ihe ịkwesịrị iji meziwanye mkpọsa ndị ahịa gị iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Anyị na-ekwe nkwa na anyị nwere kacha mma AdWords maka ụlọ ọrụ njikọta, chọpụta ihe ndị ọzọ!
Azọpụta oge, ego na ihe onwunwe!
Ezubere ngwaọrụ anyị maka Google Ads maka ebumnuche ịchekwa gị ego, akụrụngwa, yana nke kachasị mkpa .... Oge!
Na anyị Slack , Microsoft Teams integrations, Google Chat bot , Google Spre ads heets Tinye-na, na anyị Google Ads mkpọsa e kere eke, njikarịcha na-ebugote, i ga-enwe ike-eji oge gị oge bara uru na ihe bụ mkpa n'ezie: gị ahịa, na ka nwere oge fọdụrụ iji nụ ụtọ kọfị ụtụtụ ị hụrụ n'anya!
Ịchọpụta ihe kasị mma azụmahịa ohere, ka ndị kasị mma mkpọsa, na-Ịma Ọkwa na ihe ndị kasị mkpa iji zere-enweghị isi na-adọpụ uche, na-kwa ọnwa akụkọ, wdg Na nkenke, ngwaọrụ gbakwasara AdWords maka Ụlọ ọrụ nke ga-azọpụta gị oge uche na ihe dị mkpa n'ezie.
Ihe unu nwere ike ime na anyị ngwaọrụ
Zuru ezu kwa ọnwa akụkọ na PDF format na n'ụzọ zuru okè na-egosi ndị metrics na uto nke gị ahịa 'mkpọsa. Focus na data na ihe gị, tụọ naanị ihe dị mkpa otú i nwere ike ịzọpụta oge na analysis na-enweghị adịkwa zuru ezu na ihe kasị mkpa na-eme ka asian, data-chụpụrụ mkpebi.
Ntughari ntughari, Keywords ... Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma na akụkọ ahaziri iche. Ozi niile ịchọrọ, yana otu esi eji ya. Mee ka mkpọsa gị na nke ndị ahịa gị kwalite na arụmọrụ, site na iji ndụmọdụ na nkwado akwadoro maka Google Adwords maka ụlọ ọrụ.
Kasị mma atụmatụ maka otu dabeere na ngwa ọdịnala
Nabata ezigbo oge na akụkọ gbasara arụmọrụ ndị ahịa gị. Mgbe anyị na-ekwu maka AdWords maka ụlọ ọrụ, anyị kwesịrị iburu n'uche ngwa ọrụ anyị ji ma chọọ iji ohere ị nweta ọkwa na akụkọ nke mkpọsa anyị. Kedu ihe ị na-eji na gị n'ụlọnga? Site na ngwa anyị, ị ga - enwe ike Google Ads gị na otu n’ime atọ ngwa ọrụ mkparịta ụka kachasị ewu ewu n’ụwa niile: Slack , Microsoft Teams ma ọ bụ Google Chat . Họrọ ma bulie arụmọrụ nke mkpọsa nke ndị ahịa gị na data!
Ina-amara gị ọkwa banyere naanị ihe kacha mkpa
Hazie ma hazie ọkwa gị iji mara ihe niile na - eme na mkpọsa gị na nke ndị ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma mgbe mgbanwe na-ada ma ọ bụ mgbe mmefu mkpọsa kwesịrị ịbawanye, setịpụ otu n'ime ọkwa anyị ma anyị ga-agwa gị na ngwa nkwukọrịta ị họọrọ! ( Slack , Microsoft Teams ma ọ bụ Google Chat ).
Nke a ụzọ, ị ga-abụ onye na-egosi nke parameters ị chọrọ Hazie, nke ozi ị chọrọ na-enweta, na nke ga-atụle dị ka iju ma mkpa ka a gosiri gị iji na-maara nke ndị dị oké mkpa oge / data .
Nke mere na ọ dịghị ihe a na-ahụghị na mkpọsa ndị ahịa gị na-adị n'elu mgbe niile! Google Ads maka ụlọ ọrụ dịtụbeghị mfe.
Egbula oge nke abụọ iji aka gị na-anakọta metrik na data mkpọsa n'aka ndị ahịa gị. Tinye ha niile ngwa ngwa na ngwa ngwa na mpempe akwụkwọ Google. Google Ads maka ụlọ ọrụ nke ọma, na-eji ngwaọrụ nke Google na ngwa ndị ọzọ amaara ama nke ị na-eji na ụlọ ọrụ gị.
Google Sheets bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị eji eme ihe n'ụwa niile na azụmaahịa niile maka ịhazi akwụkwọ na otu? Ọ bụrụ na ị na-eji ya, ịnwere ike ibuli usoro gị ma nwee data gị niile kachasị na draịvụ gị. Ọ gaghị adị mfe!
Gịnị na-eme ihe dị iche?
Gini kpatara iji ngwa Google AdWords anyi maka ulo oru?
Na Clever Ads anyị nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke mmemme Premier Google, nke anyị ji ekwe nkwa na usoro a bụ 100% echedoro ma anyị kwere nkwa na anyị ga-asọpụrụ data nkeonwe gị yana ndị ahịa gị. Ihe kariri ulo oru na ulo oru 150,000 aryere anyi oru ma tukwasi anyi obi ka anyi bulie usoro Google Ads na arụmọrụ ha, ya na ezigbo nsonaazụ. Won't gaghị akwa ụta maka ya, ụzọ kachasị mma ma dị ọnụ ala iji bulie Google Ads maka ụlọ ọrụ.
Site na ngwa ọrụ anyị na nka anyị jisiri ike gbanwee ihe mgbagwoju anya ma na-ewe oge dị ka ihe dị mfe na ngwa ngwa. I nwedịrị ike ịchọta AdWords maka ụlọ ọrụ na-atọ anyị ụtọ! You'll ga-enwe ike "igwu egwu" na akụkọ anyị na ndụmọdụ iji nweta oke ROI (Nlaghachi na Investment) na akara kachasị na-enweghị amata ya, niile mgbe ị na-amụ ihe!
Tụgharịa gị n'ụlọnga n'ime akwụkwọ gị n'ụlọnga na Google Ads ozi esighi na mkpọsa, ndị amamihe na ọtụtụ ahụmahụ na usoro a tinyere Clever Ads . Anyị maara mgbe niile ihe ị ga-eme ọzọ, ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi ka anyị were usoro mbụ ma ọ bụ nke ọzọ.
Anyị kwenyere na ụlọ ọrụ ọ bụla nke nha na mmefu ego ọ bụla kwesịrị ịnwe mgbasa ozi Google, yabụ anyị ewepụtala ngwa Google Ads maka ụlọ ọrụ ga-enye gị ohere ịsọ mpi na ọkwa egwuregwu na ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe nwere nnukwu ahịa mmefu ego.
Ihe kpatara ị ga - eji iji ngwa anyị nwere ike ịdị iche iche, ma ị na - eche na Google Ads ndị ahịa gị nwere ike ịka mma, ma ịchọrọ ịlele ma ụlọ ọrụ azụmaahịa gị na-eme ihe kachasị, ma ọ bụ ma eleghị anya ị bụ naanị Ọ na-achọ ịmata ma ọrụ ha ọ na-arụ nwere ezigbo ego? Clever Ads AdWords maka ụlọ ọrụ bụ gị ụlọ nke ngwaọrụ.
Tụkwasị na nke a, ndị ọkachamara anyị dị njikere mgbe niile inyere gị aka, ị nwere ike ịkpọtụrụ ha mgbe ọ bụla maka ajụjụ ọ bụla, nchegbu, aro ma ọ bụ enyemaka ị chọrọ na onye enyemaka @ cleverads .com, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị na ụlọ ọrụ gị aka ihe ọ bụla gị na gị n'ụlọnga mkpa.
Integrated Suite nke Tools
Ọzọ uru ma ọ bụ uru nke na-eji anyị AdWords ngwaọrụ nke Clever Ads ụlọ ọrụ bụ na ị nwere ike ịnweta ihe niile si gị Clever Ads akara panel, ị nwere ike ikpokọta na ike nke Google Ads na ndị niile na ala nke management na Clever Ads na-enye gị. Akụkọ anyị niile, ihe ngosi, ndụmọdụ ga - enyere gị aka ịmepụta Google Ads Mgbasa ozi zuru oke maka ndị ahịa gị, ka ị na-enwe ọhụụ na algorithms ọhụrụ Google, mgbatị mgbasa ozi, wdg. Iji mepụta nnukwu ọkọlọtọ maka ngosipụta ngosi nke ndị ahịa gị, ma ọ bụ ime ka echiche okwu, tinyere ihe ndi ozo. Anyị niile-na-otu setịpụrụ iche Google Ads maka Agencies ngwaọrụ dị njikere ịrụ ọrụ siri ike mgbe ị na-eji oge gị eme ihe kachasị mma: ịgba ọsọ na ijikwa azụmahịa gị na ịme ndị ahịa gị obi ụtọ.
Team dabeere apps maka nkwurịta okwu
Jikọta Google Ads na Slack , Microsoft Teams , ma ọ bụ Google Chat
Hazie akara ngosi ọdịnala gị iji nweta otu oge ma ọ bụ akụkọ kwa izu iji nweta metrik site na nkata ma nata eserese na metrik metụtara arụmọrụ nke onye ahịa gị. Google AdWords maka ụlọ ọrụ dị mfe site na iji nkata nkata dị ka nke a!
Mee ka Google Ads gị mepụtara n'efu.
Nweta nkwụsị ikpeazụ nke ads ozi gị site na Clever Google Ads Audit ma bulie arụmọrụ Mgbasa ozi Google gị maka obere.
Nsụgharị Google Ads
Emela ka ókè na azụmahịa gị. Kpọsaanụ n'ebe ọ bụla ị chọrọ! Ịsụgharị ihe niile n'ime otutu asụsụ.
Iyo gị pụta na-achọpụta na nke zuru okè ohere maka gị mkpọsa.
Ngwa ahịa ngwa ahịa ndị ọzọ Clever Ads
All ngwaọrụ gị mkpa jirichaa gị ahịa 'digital ahịa mkpọsa.